မတ်လ ၈ ရက် - မတ်လမက်ဒရစ်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည် - ကမ္ဘာ့မတ်လ
ပင်မစာမျက်နှာ » NOTICIAS » စာနယ်ဇင်းမှတ်စု » မတ် ၈ - မတ်လသည်မက်ဒရစ်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်
18 / 03 / 2020 15 / 03 / 2020 အားဖြင့် အန်တိုနီယို Gancedo
မတ် ၈ - ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဆန်းသစ်မှုအတွက်ဒုတိယမြောက်ကမ္ဘာ့ချီတက်ပွဲသည်မက်ဒရစ်တွင်၎င်း၏လမ်းကြောင်းကိုနိဂုံးချုပ်ထားသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၅၁ နိုင်ငံနှင့်မြို့ပေါင်း ၁၂၂ မြို့တွင်လှုပ်ရှားမှုများဖြင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကို ၁၅ ရက်ကြာသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးနောက်အခက်အခဲများနှင့်အဖြစ်အပျက်များစွာကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ2ª သူမသည်မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင်မက်ဒရစ်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ထိုရက်သည်အမျိုးသမီးများရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ မတ်လ ၇ ရက်နှင့် ၈ ရက်အကြားဖြစ်ရပ်များမှတစ်ဆင့်ထိုရောက်ရှိမှုကိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
စနေနေ့၊ မတ် ၇ ရက် - Vallecas မှ Retiro အထိဖြစ်သည်
နံနက်ခင်း ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ အဆိုပါ Vallecas ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက် del Pozo,atwinning ဖျော်ဖြေပွဲ အဆိုပါအကြား Núñez de Arenas ကျောင်းPequeñas Huellas သံစုံတီးဝိုင်း (တူရင်) နှင့် Manises ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ Athenaeum (Valencia)၊ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမပေါင်းတစ်ရာတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဂီတအပိုင်းများနှင့်အချို့သောရက်ပ်သီချင်းများကိုသီဆိုခဲ့ကြသည်။
မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများမှလူထုရှေ့သို့မရောက်ရှိမီ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ခြင်း၏နောက်ခံပုံများပါ ၀ င်ပြီးရာဖေးဒေးလာရူဘီယာသည်ပထမဆုံးလူသားသင်္ကေတကိုNúñez de Arenas ကျောင်းတွင်အတိအကျပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်၎င်းသည် အမွှာ World March အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများမှပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ သူကမှတ်ချက်ပေးရာ၌သူသည်လူငယ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်တေးဂီတအသုံးအနှုန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ရက်ပ်ကိုသုံးသောယောက်ျားလေးများကိုနေရာများစွာတွင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းစသည့်တန်ဖိုးအသစ်များကိုလမ်းပြနေသောလူငယ်များကိုအာရုံစိုက်ရန်လူကြီးများကိုအားပေးခဲ့သည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင်မတ်လ၏“ တရားဝင်” ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့သည် အာရပ်အိမ်ခန်းမ အဆိုပါ Retiro ပန်းခြံအနီး။ တက်ရောက်သူများသည် ၀ င်ပေါက်ခန်းမအတွင်းမတ်လအတွင်းအခြေစိုက်အဖွဲ့သို့ပေးအပ်သည့်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများနှင့်မြေထဲပင်လယ်ကို ဖြတ်၍ အာဖရိကရှိမတူကွဲပြားသောနိုင်ငံများမှရောမသို့ရောက်ရှိလာသည့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားလူငယ်များ၏ပုံများပါ ၀ င်သည့်ဝင်ပေါက်ခန်းမ၌ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သည်။
Casa Árabeအားကျေးဇူးတင်စကားအနည်းငယ်ဖြင့် Martina S. သည်တက်ရောက်လာသူများကိုကြိုဆိုခဲ့သည်။ အချို့မှာအိန္ဒိယ (Deepak V. )၊ ကိုလံဘီယာ (Cecilia U. )၊ ချီလီ (လီလီအေ)၊ ဗီဇာသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးပြissuesနာများကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမဖြစ်နိုင်သည့်သူငယ်ချင်းများအပါအ ၀ င် Denis M. ) Italy (Alessandro C. , Diego M. နှင့် Monica B. ), ဂျာမနီ (Sandro C. ) တို့သည်လည်းအစီအစဉ်ကို streaming မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ။ Rafael de la Rubia သည်ဤဒုတိယမြောက် MM ပေါ်ပေါက်လာပုံနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်ပတ်သက်သောကွဲပြားခြားနားမှုများအကြောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များကိုပြန်ပြောပြသည်။
ထို့နောက်တိုက်ကြီးငါးနိုင်ငံမှနိုင်ငံများမှကိုယ်စားလှယ်များကချီတက်ဆန္ဒပြစဉ်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ရပ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ မှတ်စုများ၊ သို့ရာတွင်ဖော်ပြချက်များ၊ ပုံဖော်ခြင်းဆိုင်ရာပရောဂျက်များနှင့်နိုင်ငံအသီးသီးမှဗွီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျများထည့်သွင်းခြင်းတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောကြောင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်မရေမတွက်နိုင်သည့်အုပ်စုများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကရောင်စုံရောင်စုံလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ပညာရေးစင်တာများအကြား Twinning ။ ကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များ။
မတ်လစာအုပ်များထုတ်ဝေခြင်း - ကရင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်းနှင့်အတူ Saure ထုတ်ဝေရေးပုံ၏စာအုပ်။ (ခ) ဒုတိယအကြိမ်မြောက်စာအုပ်၏စာအုပ်၊ ပြီးခဲ့သည့်အရာများကိုပြုစုခြင်းနှင့် (ဂ) MM ၏ငန်းကစားနည်း
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး "မြေထဲပင်လယ်, ငြိမ်းချမ်းရေးပင်လယ်" အဖြစ်မြို့ကြီးများကြေညာ ငြိမ်းချမ်းရေးသံရုံးများ။ Adriatic ပင်လယ်၌နောက်ထပ်အရေးယူ။
ဆီနီဂေါ (Thiès): ဖိုရမ် "အကြမ်းမဖက်ဆီသို့အာဖရိက"
ညီလာခံ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများ " အာဂျင်တီးနား (Tucumán)
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ငြိမ်းချမ်းရေးကိုစတင်လုပ်ဆောင်ကြပါစို့ "နီပေါ / အိန္ဒိယ / ပါကစ္စတန်၌တည်၏
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်များ၏ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း (နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေး)တောင်ကိုရီးယား (ဆိုးလ်) ၌တည်၏။
နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာညီလာခံတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးဗျူရို ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဂူတာရက်စ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ (နယူးယောက်)
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ TPAN ကိုလက်ခံအတည်ပြုရန်ပွဲတော်အဆိုပြုလွှာ (ဟီရိုရှီးမား)
တနင်္ဂနွေမတ်လ ၈ ရက် - Puerta del Sol၊ Km.8 နှင့်လူ့သင်္ကေတ
11:00 a.m. မှစ။ ထူးဆန်းတဲ့ဘဲလေးကျင်းပခဲ့သည် Km.0 များ၏ရှေ့မှောက်၌ Puerta del Sol မှာ ဖြတ်သန်းသွားလာသူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်သည်။ သူငယ်ချင်းအနည်းငယ်ရှိသည့်မက်ဒရစ်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့သည်ဘရပ်ဆဲလ်နှင့်တန်ဂျီယာတို့မှမတိုင်မီတစ်ရက်အလိုတွင်အကြမ်းမဖက်ရေးသင်္ကေတကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်ရေးဆွဲနေစဉ်တွင်စတီရီယိုနှင့်လှည့်ဖျားစာချုပ်များကိုတပ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ပတ်ပတ်လည်ကိုစက်ဝိုင်းဖန်တီးခဲ့တယ်။ မှ "မာရီယန်,ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်အမျိုးသမီးများသူသည်ထိုနေ့၏ပွဲစဉ်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုစတီးသံသယကိုအာရုံစိုက်စေပြီးရာဖေးလ်ဒီယာရူဘီယာအားနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ "… ၁၅၉ ရက်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဒုတိယမတ်လငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ခြင်းအတွက်ပိတ်ပစ်လိုက်သည်။
ဤအချိန်တွင် MM သည်နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ နှင့်မြို့ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်တွင်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာအနှံ့လှည့်လည်သွားလာနေသောနေရာများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုရှိသည်။ ဤချီတက်ပွဲသည်အကြမ်းမဖက်ရေးမိဘများမှလှုံ့ဆော်သည် ငါတို့ရှေ့တွင်အဘယ်သူရှိသနည်း။ ငါတို့ကိုလမ်းတလျှောက်တွင်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ Sevagram Ashram (အိန္ဒိယ) မှ M. Gandhi နှင့် Punta de Vacas Park (Argentina) ရှိ Silo စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ”။ သင်တန်းသားများကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပြီးနောက် everyone ¡ the စီမံကိန်းသို့ပါ ၀ င်ရန်လူတိုင်းကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည်။မတ်လ ၃ ရက် !!!3ခုနှစ်, ယခုမှစ။5နှစ်.
အားဖြင့် Encarna အက်စ် အကြမ်းမဖက်မှုအတွက် Humanist Women of Associationအကြမ်းမဖက်သောကမ္ဘာကြီးတွင်အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ofကိုထောက်ခံရန်အသနားခံခဲ့သည်။ “ ယခုအချိန်သည်အမျိုးသမီးများထခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အနှစ်သာရပိုင်ရှင်နှင့်ဘဝကိုကျူးလွန်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ သည်ခြိမ်းခြောက်မှု၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ခြိမ်းခြောက်ခံရကြောင်း၊ ၎င်းအားကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကတိက ၀ တ်ပြုသည်။ ယနေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘဝကာကွယ်မှု၊ ဆက်သွယ်မှုများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ကွန်ယက်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကွန်ယက်များ၊ စောင့်ရှောက်မှုများ၊ ငါတို့မျိုးစိတ်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်သွားနိုင်ဖို့အတွက်၊ လူအားလုံးတညီတညွတ်တည်းစံချိန်တင်ထားတယ်”
ယခင်ကစီစဉ်ထားသောကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအပြီးတွင်အုပ်စုနှစ်စုသည်ဝင်ရိုးစွန်းနှစ်ခုဖြင့်တတန်းထဲ ၀ င်ခဲ့ပြီးအကြမ်းမဖက်ရေးသင်္ကေတကိုပြုပြင်သည်အထိမြေပြင်ပေါ်တွင်ရေးဆွဲထားသောမျဉ်းကြောင်းများတစ်လျှောက်ရွေ့လျားခဲ့သည်။ သဘောတူညီခဲ့သည့်အချက်ပြအဖြူနှင့်ခရမ်းရောင်ကတ်ထူပြားများပေါ်ထွက်လာပြီးခရမ်းရောင်အလယ်ဗဟိုမှအမျိုးသမီးများသည်အကြမ်းမဖက်မှုကိုအဖြူရောင်ဖြင့်မည်သို့ပျံ့နှံ့သွားသည်ကိုပြသသည်။ အထက်ပါပုံများမှဖြစ်ရပ်၏မှတ်ဉာဏ်ရှိရန်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ စက်ဝိုင်းမှထွက်ခွာပြီးပါ ၀ င်သူများကအခြားသူများနှင့်အတူဝမ်းမြောက်မှုကိုမျှဝေခဲ့ကြသည်။
၁၄၈၀၀၀ ကီလိုမီတာအကွာတွင်မတ်လတရားဝင်ပိတ်လိုက်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၅၉ ရက်ကစွန့်ခွာသွားသောနေရာမှ Km.148 နှင့်ပင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုလှည့်ပတ်နေသည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဒုတိယအကြိမ်မြောက် MM တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည် 2M ပူးတွဲသရုပ်ပြမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများမှလူများအကြားအတူတကွပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောနေ့ရက်များဖြစ်ပြီးအနာဂတ်တွင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ယင်း၏သက်သေသာဓကမှာနက်ဖြန်နေ့၌၎င်း၏စီမံကိန်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်အလွတ်သဘောအစည်းအဝေးများတွင်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည် အကြမ်းမဖက်မှုအတွက်လက်တင်အမေရိကန်မတ်လ နှင့်ကင်ပိန်း မြေထဲပင်လယ်ငြိမ်းချမ်းရေး ...
အရေးအသား စစ်ပွဲမရှိဘဲနှင့်အကြမ်းဖက်မှုမရှိဘဲကမ္ဘာ့မှ Martine SICARD
ဓာတ်ပုံများ Pepi နှင့် Juan-Carlos နှင့်, Deepak, Saida, Vanessa, ...
0 / 5	(0 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ)
+ ငြိမ်းချမ်းရေး + အကြမ်းမဖက် - နျူကလီးယားလက်နက်
© 2020 ကတီထွင် 4P စျေးကွက်